के तपाईँलाई थाहा छ, पसलमा बिक्री गर्न राखिएको घडीमा सधैँ किन १०ः१० बजेको हुन्छ ? – Sandesh Press
May 26, 2022 137
काठमाडौं । तपाईँले कतै घडी पसलमा घडी किन्न गएको बेला होस् वा अन्य कुनै विज्ञापन देख्दा नै किन नहोस्, जहाँ पनि घडीको समय १० बजेर १० मिनेटमा सेट गरेको देख्नु भएकै होला । घडी बिक्री हुने विभिन्न ठाउँमा घडीको समय एउटै अर्थात १० बजेर १० मिनेट राखेको देख्दा किन भन्ने जिज्ञासा मनमा लागेको हुनसक्छ ।
यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो कुरा ख्याल गर्नुभएको छैन भने कुनै पनि घडीको विज्ञापन हेर्नुभयो भने त्यहाँ १० बजेर १० मिनेटको समय नै देख्नु हुनेछ । आज हामी तपाईँलाई प्रायः घडीमा किन उही समय राखेर विज्ञापन गरिएको हुन्छ भन्ने बारेमा बताउँदै छौँ ।
बिक्रेताले किन घडीमा सधैँ १० बजेर १० मिनेटको समय राखेका हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै भ्रामक कुराहरू पनि फैलिएका छन् । सुरुमा बिक्री गर्न घडीको समय १० बजेर १० मिनेट राख्नु पछाडिका केही भ्रामक कुराहरूबारे चर्चा गरौँ ।
त्यसोभए घडीको डिफल्ट टाइम १० बजेर १० मिनेट राख्नुको वास्तविकता के हो त ? प्रायः धेरै कम्पनीले आफ्नो लोगो घडीको १२ अङ्कको ठीक तल राखेका हुन्छन् । घडीमा १० बजेर १० मिनेटको समय राख्दा कम्पनीको लोगो ठीक बीचमा पर्छ । जसले गर्दा मानिसहरूको नजरमा कम्पनीको लोगो पर्छ ।
त्यही लोगो मानिसहरूको नजरमा पर्दा उनीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएर घडी खरिद गर्छन् । एउटा यही मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा घडीको डिफल्ट टाइम १० बजेर १० मिनेट सेट गरिएको हुन्छ । त्यस्तै घडीमा मिति, बार वा अन्य कुरा ३, ९ वा ६ नम्बरको छेउमा राखिएको हुन्छ । मुख्य सुई १० बजेर १० मिनेट राख्दा ती चिजहरू प्रस्ट देखिन्छन् ।
Prevडिभोर्सपछि पश्चाताप गर्दै सामन्था, श्रीमानको नाममा यस्तो ट्याटु !
Nextअब तीन महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने
मौसम विभागले दियो २४ घण्टे चेतावनी, आजदेखि सोमबारसम्म यी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात